Mpanamboatra sy mpamatsy hafa | China Others Factory
Fizarana metaly diamondra ho an'ny fanapahana na fitotoana simenitra sy vato
Fizarana metaly diamondra ampiasaina hanapahana na fitotoana simenitra sy vato. Ny poti diamondra dia manana tanjaka ambony, be dia be, fanoherana mahery vaika ary ela velona. Ny fizarana metaly dia misy amin'ny endrika sy habe isan-karazany, ny mortar sy ny adhesive dia azo namboarina.
HTC EZ adaptatera ho an'ny fanoloana haingana ny pad polishing resin amin'ny milina HTC. Azo ovaina ho ampiasaina amin'ny milina fitotoana sy fikosoham-bary maro samihafa. Ny quilt nylon dia natao hifikitra mafy amin'ny hoditra, ary tsy ho simba noho ny ranomaso miverimberina. Mora, mahomby ary lafo vidy.
Carbide Bush Hammer Roller Bits ho an'ny tafo vato sy Beton
Carbide Bush Hammer Roller Bits dia natao ho an'ny vato sy Beton surfaces Mba hahatonga ny etỳ ambonin'ny marokoroko sy Non-slip gorodona, toy ny litchi famaranana surface.High mitafy fanoherana sy ny fiainana lava.Mahery setra sy mahomby.Ny roimemy-hammer-roller fototra azo atao amin'ny fifandraisana samy hafa ny mifanaraka amin'ny milina samihafa.
Lavina Diamond Tools Bush Hammer Roller Plate ho an'ny vato granita
Diamond Bush Hammer rollers ho an'ny fanaovana ny ety ambonin'ny tany marokoroko sy Non-slip, toy ny litchi famaranana surface.It afaka miaraka na tsy misy ny plate.We manao roimemy roimemy isan-karazany ho an'ny karazana milina fitotoana takelaka, toy ny Lavina, Husqvarna, HTC, Terrco , sns. Manolotra tolotra fanamboarana ihany koa izahay.
Fitaovana fikosoham-bary vita amin'ny vato vita amin'ny marbra granita diamondra ho an'ny fikosoham-bary
Diamondra fitaovana maranitra zorony dia ampiasaina mba handranitana zorony, tohatra, ambanin'ny cabinets, curves, beveled maranitra sisiny, etc. Mety amin'ny fikosoham-bary isan-karazany gorodona sy vato surfaces.The avo fitotoana marina mahatonga ny ambonin'ny kalitao tsara aorian'ny fitsaboana.Fast fitotoana, fikosoham-bary avo lenta.